Classics uye mamwe mabhuku epachirwere | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela, Nyaya, Zvinotyisa
Mumavhiki ano e global crisis for the coronavirus kutengesa, kubvunza uye ongororo zvakakwira mabhuku yechinyakare uye isina kunyanya kujairika nezve denda nedzimwe njodzi dzakatambudza nyika. Njodzi dzinotenderera dzakaparadza vanhu munhoroondo dzadzo dzese uye, sezvazvino, anga ari manyuko e Kufuridzirwa kune mamwe ma greats nyaya dzekunyora. Ichi chi Kurumidza kuongorora vamwe vacho.
1 Iyo Decameron - Giovanni Boccaccio
2 Denda Year Diary - Daniel Defoe
3 Iyo Mask yeMutsvuku Rufu - Edgar Allan Poe
4 Denda - Albert Camus
5 Rondedzero paHupofu - José Saramago
6 Munguva dzekutapurirana - Paolo Giordano
8 Iyo Bleak Planet - David Wallace-Wells
9 Hondo Yenyika Z - Max Brooks
Iyo Decameron - Giovanni Boccaccio
Yakasarudzika pakati pechinyakare, iri basa naBoccaccio rinotaura nyaya ye gumi vadiki kubva kuFlorence, vakadzi vanomwe nevarume vatatu avo, kutiza denda bubonic ye 1348, kupotera mumusha uri munyika. Ipapo vachave nemazuva gumi nemana uye kupfuudza iyo nguva yavanofunga kuverenga nyaya dzinotendeuka mazuva ese. Uye idzo nyaya ndedze marudzi ese, kubva erootic uye izere ne ingwaru y tariro asiwo zvinosuwisa.
Dhayari yegore redenda - Daniel Defoe
Kubudirira kweako Robinson Crusoe Yakafukidza chikamu chakanaka cheamwe mabasa nemunyori wechiChirungu uyo ​​akararama pakati pezana ramakore rechi XNUMX nerechi XNUMX. Asi zita iri, nekufamba kwenguva, yakave Referrer yevamwe vanyori vakaita saCamus. Zviri nezve ngano nyaya nezve zvakaitika kumurume muna 1665, apo London akatambura kushevedzwa Denda guru, denda rekupedzisira redenda iri re denda iyo yakatora gore. Iyo inorondedzerwa zvichiteerana uye ine zvaDefoe zvaanoona semwana ararama munguva.
Iyo Masque yeRutsvuku Rufu - Edgar Allan Poe
Iwe haugone kupotsa iyi nyaya, imwe yeanonyanya kuzivikanwa, eiyo Maestro Del zvimwe gothic zvinotyisa ndiani aive munyori mukuru weBoston. Yakabudiswa izvozvi muna Chivabvu asi kubva 1842. Iyo nyaya inoitika munzvimbo yekufungidzira, vagari vayo vaitambura a denda rinotyisa zvinodaidzwa, rufu rutsvuku, iyo mukuwedzera mukupararira nekukurumidza zvikuru, yakaburitsa hombe kurasikirwa neropa vanyajambwa vavo.
Kubudirira, the muchinda yehumambo uhwu, uye pasina hanya nezvakawanda zvinoitika, anosarudza potera aine shamwari dzake nevapfambi muabbey. Ikoko, ari oga uye asina hanya, vanopedza mazuva avo nemhando dzose dze zvoumbozha, mafaro uye zvekudya zvakawanda. Uye iri mune kumwe kwekutsauka kwavanoronga, a masquerade, apo a muenzi asingafanoonekwi.
Denda - Albert Camus
Iko kutamba inonyanyo kuzivikanwa yemunyori wechiFrench uye ndave mumwe weiyo anotengesa zvakanyanya mabhuku enguva yacho. Anotanga nekutaura zvakanyatsoita mutsara kubva ku Dhayari yegore redendanaDefoe uye inoiswa mukupedzisira makumi mana Zana ramakore rechiXNUMX muna Oran. Guta rakavharirwa zvisingatarisirwe kuputika kwedenda bubonic uye zano rayo rinodzoreredza chirwere chekutanga zvakare kusvikira denda rapfuura.
Iko kiyi iri mu kudzika iyo Camus inonyora pane yake nzira vese vari vaviri pamwe uye pamwe chete yenzanga kana vakatarisana nemamiriro ezvinhu, uye zvakare mu vanhu yehunhu hwake.
Mutsara pamusoro peBofu - Jose Saramago
Rimwe zita zvakakosha pamusoro wenyaya iyo Saramago akaitazve izvi chiriporipotyo upofu denda iyo inopararira nenzira yakazara. Kuvharirwa mune kwega nekurasikirwa muguta, vanorwara vanofanirwa dzidza kurarama chero zvodii pasina kurasikirwa ne pfungwa, kukumbira kune iyo kubatana uye nekupindura kuzvida kwevamwe.
Munguva dzekutapurirana - Paolo Giordano
Yakabudiswa muna Kurume 20 uye iri yakanyorwa munguva chaiyo nekuda kweizvi munyori uye nyanzvi yefizikiki Italian, seiyo coronavirus denda muItari. Yakaumbwa senge zuva nezuva, Giordano (Iko kusurukirwa kwenhamba yepamusoro) ari kugovana yake kuratidzira uye manzwiro nezve iyi mamiriro, iyo, pamusoro pezvose, isiri nyowani asi inoda, zvakare, voluntad yevose kuti vatione seumwe nzanga yepasi rose.
Mumwe akakosha apa ndiMambo, uyo mune iri zita anotaurira iyo kupararira kwehutachional, yakagadzirwa senge inogona kuita bhakitiriya chombo, neUnited States nenyika, zvichikonzera kufa kwevakawanda vevanhu Mwanakomana wako, Joe Chikomo, taura mumwe chirevo chakafanana mu Fuego, uko vatambi vayo vanotambura nedenda repasi rose repore rinokonzera kupisa kupisa ndiani anorwara.
Nyika isina kugadzikana - David Wallace-Wells
Yakasimudzwa kubva pasumbu re mananara zvinokonzerwa ne kuchinja kwemamiriro ekunze, kusanganisira iyo kupararira kwezvipembenene, munyori anoongorora iyo zviratidzo chii chirikuita kumashure uye chii chichauya, pamwe zvakatonyanya. Zviri nezve kukurumidzira kumuka kudzosera shanduko iyi nekukurumidza sezvazvinogona.
Hondo Yenyika Z - Max Brooks
Yakaburitswa muna 2006, yaive bestseller izvozvi muUnited States, kutora mazita ezvakanakisa sainzi ngano nemazita epocalyptic, izvo zvakapa kumuka kwemabhuku mazhinji akafanana uko zombies ndivo protagonists. Asi pamwe yake firimu vhezheni naBrad Pitt vachitungamira vatambi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Classics uye mamwe mabhuku epachirwere
Ramón Aragon Mladosich akadaro
Ini ndinokurudzira "Zuva rematatu" naJohn Wyndham ... Kwaziso!
Pindura kuna Ramón Aragón Mladosich
Icho chaicho chinyorwa chinonakidza kwazvo. Mwedzi mishoma yapfuura ndakave nemufaro wekuverenga "La denda" naA A. Camus uye ibhuku, mumitsara yakapfava, rakadzika uye rinopinda maererano nekushanduka kwevatambi zvine chekuita nechirwere, chinokwezva zvakanyanya.